Maitiro ekuisa Nintendo uye Sega mitambo paApple TV 4 | IPhone nhau
Maitiro ekuisa Nintendo uye Sega mitambo paApple TV 4
Emulators ndiyo mhinduro inowanikwa nevaya vanoda kunakidzwa neyemhando yepamusoro mitambo yenguva dzose pakombuta yavo kana smartphone. Asi ikozvino chiitiko ichi chinogona kuve chiri nani nekutenda kuApple TV 4. Chishandiso chitsva cheApple multimedia chine mukana wekuisa mafomu kubva kuApp Store yayo, asi zvakare nenzira "isiriyo", iyo inokutendera iwe kuisa Provenance, Nintendo uye SEGA emulator. Kana iwe uchida kunakidzwa Super Mario Bros pane yako Apple TV 4, heano matanho ese aunofanirwa kutora kuti uzviite, uye zvakare yakatsanangurwa pavhidhiyo kuti iite kuti iwedzere kujekesa.
Apple yekuvandudza account (yemahara inoshanda) iyo iwe yaunogona kuwana pano.
Komputa ine OS X El Capitan uye Xcode yakaiswa
Chizvarwa chechitatu Apple TV
USB-A kune USB-C tambo
Nhanho yekutanga kutora iyo Provenance app. Unogona kuiwana paGitHub, nekudzvanya pa Iyi link. Iwe unofanirwa kuteedzera iyi link yekushandisa, nekudzvanya painoratidzwa mumufananidzo kuikopa kubhodhibhodhi.
Unganidza yako Apple TV kukombuta yako kuburikidza neiyo USB tambo uye woibatidza. Mushure meiyo yakavhurika Xcode. Kana iwe usati uine yako yekuvandudza account akawedzerwazve, enda kune "Zvaunofarira> Maakaundi" uye wedzera yako yekuvandudza account kuti pasave nematambudziko panguva yekushandisa yekugadzira maitiro. Waita izvo kumusoro vhura menyu "Source Kudzora> Tarisa Kunze" uye muhwindo rinovhura unama kero iyo yawakateedzera kare kuGitHub. Dzvanya Zvichitevera. Mushure meizvozvo tinya pane Inoteedzazve kurodha kunyorera. Kana ikakundikana iwe (zvakunditadza kanoverengeka) dzokera woedza zvakare, kana shandura iyo "Type" munda kubva "Git" kuenda "Kupandukira", iyo yakandibatsira kuti iite kuti inyatsoshanda. Wobva wasarudza yekutanga sarudzo inoonekwa (Main kana Trunk, zvinoenderana nesarudzo yawakasarudza kare). Dzvanya pa «Inotevera» uye wobva wasarudza nzvimbo iyo iko kunoteedzera kunyorera.
Kana kurodha pasi kwapedza new Xcode hwindo kuvhura. Dzvanya pa "Provenance" kumusoro kuruboshwe uye sarudza "ProvenanceTV-Kuburitsa> Apple TV" kuti iko kunyorera kutange kugadzirwa. Maitiro aya akareba kwazvo (inopfuura hafu yeawa anditora) saka tora nemoyo murefu. Kana uchinge wapedza, tinya pa "Tamba" kumusoro kwekuruboshwe (nhema nhema), ichatanga kuisirwa paApple TV. Kamwe kuiswa kwacho kwapera, chinyorwa "Running Provenance paApple TV" chichaonekwa pane yepamusoro bhaa, zvinoreva kuti maitiro apera. Iye zvino tava kukwanisa kukatanura Apple TV kubva pakombuta yedu uye kubatidza terevhizheni yedu.
Pane yako Apple TV tsvaga iyo Provenance app uye uvhure. Sarudza "Tumira maRoms" uye nyora pasi kero inoonekwa pachiratidziri. Iyi ndiyo kero iwe yaunofanirwa kunyora mukomputa yako webhu browser kuti uwedzere maRoms kuApple TV yako. Dhawunirodha maRoms kubva kune chero peji (nyore Google yekutsvaga inokupa gumi nemimwe mhedzisiro) uye maZIP mafaera ndiwo aunofanirwa kuisa kune iyo kero.
Kunyanya, iwe unofanirwa kuzviita muRoms dhairekitori iri panoperera runyorwa. Vhura uye tinya pane bhatani bhatani «Isa Mafaira», sarudza maZIP mafaera awakadhinda uye ivo vachatova paApple TV yako ndakagadzirira kutamba. Tinokuratidza maitiro ese mune ino vhidhiyo maunogona zvakare kuona Mario muchiita paApple TV.
Emulator yakanyatsogadzirwa uye inoshanda chaizvo. Izvo zvisina kunyatsogadziriswa ndeye Siri Remote iyi mhando yemitambo, saka chinhu chakanakisa ndechekuti iwe unoshandisa iyo MFi yekudzora kure iyo inonyatso kuvandudza ruzivo rwekutamba neaya echinyakare zvakanyanya. Nakidzwa nazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Maitiro ekuisa Nintendo uye Sega mitambo paApple TV 4
elkin gomez akadaro
Apple yekuvandudza account (iyo yemahara inobatsira) iyo iwe yaunogona kusvika pano… .. chinongedzo hachishande ..
Pindura kuna elkin gomez
kugadziriswa, ndine urombo
Yakawandisa maitiro ekuvatumira kuti vapinde akawanda marongero pavanogona kurodha pasi kana kuumbiridza repo, vhure muXcode uye umhanye nayo
Kana ndarova play uye mushure mechinguva ndinowana mhosho uye pandinorova fix nyaya ndinowana inotevera meseji.
ID yeApp ine Chizivisi 'com.jamsoftonline.ProvenanceTV' haiwanike. Ndokumbira upinze tambo yakasiyana.
Zvakaitika kune mumwe wenyu here? Unga ndibatsira here?
Pindura kuna mmunozg
Pinda yako Apple account iyo iwe yaunofanirwa kunge iwe wakambo nyora seyakagadzira.
Mhoroi ini ndine dambudziko rakafanana neremunzong uye ini ndine yangu apple account yakaiswa. pasina kubhadhara iyo € 99 yeiyo. Chii chiripo chekuita? kubhadhara kuti chitupa chishande? Kwaziso.
chinhu chimwe chete chinoita kwandiri
Pindura kune isac
Zvinondipa iko kukanganisa kwakafanana neizvo zviri pamusoro, chero mhinduro? Ndatenda
Ini ndinoda mhinduro imwechete !!! 🙁 Ndinofanira kuiisa 🙁 Ndatenda
raul tapia akadaro
pandinoisa kero pc yangu kuti ndivhure peji nekuisa ma roms ayo haavhure peji, rinoramba richiverenga sekunge raizovhura asi risingavhure, nei izvozvo zvichiitika?
Pindura raul tapia
Roman Borlado Vazquez akadaro
chikanganiso chakafanana neyangu compis ... mhinduro?
Pindura kuna Román Borlado Vázquez
Ndine vhezheni 10.1 yeapuro tv, ndinokwanisa kuisa iko kunyorera, asi kana ndikaisa rom inoikanganisa kana chimwe chinhu uye mutambo wacho haushande uye unogadzira mafaira asinganzwisisike. Iwe unoziva kuti nei ichigona uye kuti ine mhinduro yakadii. Ini ndoziva nezve vhidhiyo uye dhizaini iro basa rangu, kana iwe uchida isu tinogona kuchinjanisa uye ini ndichakubatsira iwe mune chero chaunoda kubva kune yangu nyanzvi chikamu
Maitiro ekunyora rekodhi yeApple TV 4 [Mac]
Mashandisiro ekushandisa kure kure kudzora Apple TV 4